Jonga onke amaHacks ethu eMidlalo -I-Gamepron
Fumanisa iiHacks zethu zeMidlalo
Fikelela kwi # 1 Imidlalo hacks kwi-Intanethi ngokuthenga isitshixo semveliso kwi-GamePron! Abasebenzisi bethu abaze baswele amanqaku afunekayo ukuphumelela.
Cinga ngawo onke la maxesha ungangcamla uloyiso, kuphela ukuze luphele ngokukrakra. Baninzi abadlali kwihlabathi liphela ekufuneka bethembele kubalingane babo ukuba babaphathe kwimidlalo, kwaye abo ngabantu oya kufuna ukubaphepha-xa ubabona kwiqela lakho, ukuba unethuba lokushiya, yenze! Ke kwakhona, ungasoloko uvumela nje kwizinto ezimangalisayo onokukhetha kuzo kwi-Gamepron kwaye ubonise abo udlala nabo ukuba zenziwa njani izinto. Ayinamsebenzi ukuba yeyiphi umdlalo owuthandayo, njengoko iGamepron inakho ukubonelela ngeehacks kwimidlalo eyahlukeneyo. Ukungafani kunye nomgangatho ngamabinzana amabini uya kuva kancinci xa uthetha ngeGamepron, kwaye kungenxa yenkxaso enkulu esiyibonileyo kubasebenzisi bethu.
I-Gamers kwihlabathi liphela iyagula kwaye idiniwe yokuxhomekeka kukhetho lokungabinakho okusasaza ukubuyisela impindezelo yabo. Nokuba ungumdlali omtsha ofuna amava okuphumelela okanye igqala leentlobo ezondliweyo, ukusebenzisa iihacks (kunye nokukhohlisa!) Efumaneka kwiGamepron iya kuhlala ikubeka kwimeko yokuphumelela. Uya kuba nokubulala okungaphezulu, ukusweleka okuncinci kwaye yonke-ujikeleze impumelelo ngokubanzi!
Iimpawu ezikhoyo ngaphakathi kwe cheats zethu zinokumangalisa ukuqaphela ukuzisebenzisa, ngakumbi xa abantu abaninzi bengakhange babone ngaphambili (njengeMowudi yokutsiba Super okanye iFootprint kunye neempawu zoMonakalo oMkhulu), esenza inkonzo eyodwa ukuthenga zonke hacks zakho ukusuka. Sinokuqinisekisa umgangatho wezixhobo zethu, kwaye senza njalo ngaphandle kokuhlawulisa abathengi bethu isixa semali esihlekisayo. Ngaba ukulungele ukwenza utshintsho kwaye ulwe notshaba lwakho? Ungayidlala imidlalo yakho ngokuzithemba xa une-hacks kunye ne-cheats ezikhoyo kwi-Gamepron enikwe amandla!
⬤ Isimo: online 🞄 2 lunee
⬤ Isimo: online 🞄 5 lunee
IPUBG LITE Hacks
⬤ Isimo: online 🞄 6 lunee
⬤ Isimo: online 🞄 4 lunee
⬤ Isimo: online 🞄 3 lunee
⬤ Isimo: online 🞄 1 Uhlobo
⬤ Isimo: Ukuhlaziya 🞄 2 lunee
I-Anarea Idabi Royale Hacks
⬤ Isimo: Ukuhlaziya 🞄 1 Uhlobo
⬤ Isimo: Testing 🞄 1 Uhlobo
⬤ Iyeza kunekudala